Iindaba -Ihlabathi intengiso yegraphite ye-electrode yentengiso kulindeleke ukuba ibone ukukhula okumangalisayo. Ingxelo yakutshanje yophando, uqikelelo lwe-2028
Imakethi yentonga ye-elektrode yentonga kulindeleke ukuba ibone ukukhula okumangalisayo. Ingxelo yakutshanje yophando, uqikelelo lwe-2028
Ukuqonda ukukhula kweShishini (IGI) kukhuphe ingxelo yabo entsha yophando yentengiso yemarike yegraphite kunye noqikelelo kushishino kule minyaka isibhozo izayo. Inkampani iqikelela ukuba nge-2028, ibango lehlabathi liya kukhula nge-XX%, kwaye intengiso iyakhula kwinqanaba lokukhula ngonyaka le-XX%. Ngale ngqikelelo, ikamva lentengiso yegraphite ye-electrode yentonga iyaqaqamba. Ingxelo yophando kwimakethi yentonga yegraphite ye-electrode ibandakanya ukuqonda kumacandelo ahlukeneyo entengiso, ezinje ngeentlobo, usetyenziso, abasebenzisi bokugqibela, kunye nejografi. La macandelo kunye nokukhula kwawo okulindelweyo ngo-2021-2028 kuxoxwa ngazo ngokubanzi. Ingxelo ikwachaza uphuhliso lwamva nje / ubuchule beenkampani ezihamba phambili kula macandelo entengiso kunye nophuhliso lwazo lwexesha elizayo.
Ingxelo ibandakanya iNyakatho Melika, iYurophu, i-APCA, iLatin America, uMbindi Mpuma kunye ne-Afrika. Ingxelo ibonelela ngedatha yenqanaba lelizwe.
Fumana ingxelo yesampulu yasimahla kwimarike yentonga ye-elektrode: https://industrygrowthinsights.com/request-sample/?reportId=144775
I-Showa Denko K.KFangda CarbonGrafTechGraphite India Limited (GIL) HEG Limited Donghai Carbon Jilin Carbon Yangtze Carbon Kaifeng Carbon Co., LtdSSE Nippon Carbon
Amandla aRhoqo (RP) eGrafite i-Electrode Amandla aPhezulu (i-HP) i-Graphite ye-Electrode ye-Ultra High Power (i-UHP)
Iingxelo zophando lweMarike sisixhobo esibalulekileyo sokuqonda ishishini kunye neendlela ezihamba ngayo. Banokukunceda wenze izigqibo ezingcono zeshishini ngokubonelela ngolwazi malunga nezinto ezenziwa ngabantu okhuphisana nabo, ukuba bayaphi, kwaye bahlala njani phambili. Sinokufikelela kwidatha, eya kuthi ikunike lonke ulwazi malunga nomzi mveliso wakho.
Ngeengxelo zethu zophando lweemarike, siya kubonelela ngalo lonke ulwazi olusuka kwidatha yeedemographic ukuya kwizibalo zengqondo ukuze uqiniseke ukuba isicwangciso sakho siyasebenza. Idatha yethu ichanekile kwaye ivumelanisiwe kunye neenkcukacha-manani zangoku, ke kuhlala kufanelekile xa usenza izigqibo ngekamva lenkampani yakho. Okona kubaluleke kakhulu-kuyimfihlo ngokupheleleyo! Ngaphandle komntu othenge iimveliso zethu, akakho omnye umntu onokufikelela kolu lwazi, kuba sihlala sithatha imfihlo yabathengi njengeyona nto iphambili kuthi!
Uhlalutyo lwemalike ye-graphite electrode yingxelo ehlalutya imeko kunye neengxaki zabathengi abaphambili, abathengisi kunye nabanye abathathi-nxaxheba kwimarike. Eyona mithombo iphambili kudliwanondlebe nayo ukuze kuhlanganiswe ulwazi olusemgangathweni nolobungakanani malunga neemfuno zabathengi kunye namandla kubanikezeli ngeenkonzo. Idatha yesandla sesibini iqokelelwa kwiikhathalogu, amaphepha amhlophe, ukukhutshwa koonondaba, iiposti zebhlog, okanye izalathiso zokucacisa abadlali abaphambili abanjengabavelisi abasebenza kwiimarike ezithe nkqo.
Ngeengxelo ezenziweyo kunye nokubonisana, nceda undwendwele: https://industrygrowthinsights.com/enquiry-before-buying/?reportId=144775
Ukuqonda ukukhula kweShishini (IGI) ngumhambisi ophambili kwihlabathi weengxelo zophando lweemarike, ezinamava okujongana nabathengi abangaphezulu kwama-800 kwihlabathi liphela. Sinikezela ngeengxelo zophando lweemarike ezikumgangatho ophezulu kunye nedatha, enokunceda abathengi bethu bavelise indlela entsha yokunceda ukutshintsha utyalomali kunye nethemba leshishini. Umsebenzi wethu wahlukile kwaye ucacile-sifuna ukunceda abathengi bethu ukuba babone imeko beshishini labo ukuze bakwazi ukwenza izigqibo zobulumko, ezicwangcisekileyo kwaye ke baphumelele ngokwabo.
Iinkcukacha zoqhakamshelwano: Igama: UAlex Mathews Idilesi: 500 East E Street, Ontario, CA 91764, United States. Inombolo yomnxeba: i-USA: +1 909 414 1393 Imeyile: [imeyile ikhuselwe] Iwebhusayithi: https://industrygrowthinsights.com
Iimveliso zeCarbon Yidong Carbon Co., Ltd.isigrafti yomvelisi we-elektrode kunye nokuthumela ngaphandle ukusukela ngo-2012.